Shaqeysatid lacag online ka guriga la qaybsiga dakhliga | Show Top
Shaqeysatid lacag online ka guriga la qaybsiga dakhliga
Maalin walba dadka adduunka oo dhan ayaa raadinaya internetka, sida loo shaqeysatid lacag online fadhiya guriga. Mid ka mid ah siyaabaha ugu sahlan si ay u helaan lacag online waa qaybsiga dakhliga. Waxaa jira goobo badan oo fadeexad in bixisaa macluumaad qaldan. Sidaas aad leedahay si aad u ogaato a site qaybsiga dakhliga lagu kalsoon yahay, kaas oo ku siin doona niyad wanaag iyo sidoo kale haddii aad kordhiso mushaarka badan.
Monsoon Traffic waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee advertising iyo qaybsiga dakhliga. Shirkadda qaata lacagta iibinta xayeeysiinta in dadka dooni xayaysiinta iyo gaadiidka ay galaan si ay u website. Shirkadda, markaas wadaagi dakhliga la lammaanahooda. Monsoon Traffic waa shirkad caalami ah la aqoonsan yahay. Sidaas waa inaad iyaga ku biiri kartaa oo kasban kuwa fadhiya oo lacagta guriga si fudud.
Waxaa jira laba qaar ka mid ah su'aalaha ku kici doonaa in aad maskaxdaada sida:
– Waa maxay dakhliga loo wadaagi?
– Sidee baad u isticmaali kartaa monsoon gaadiidka si ay u helaan lacag online?
– Immisa lacag ah oo aad samayn kartaa in hal bil?
Haddii aad rabto in aad hesho jawaabaha kuwaas oo aad qabto oo dhan si uun u akhri maqaalkan iyo dhaqangelinteeda.
Waa maxay dakhliga loo wadaagi?
Qaybsiga dakhliga ka dhigan tahay wadaagaan dakhliga ka mid ah ganacsatada. Waxaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay barnaamij dhiirrigelin ah. Bal qiyaas, aad leedahay shirkad oo aad tahay qofka. Haddii aad Wadaajiseen ah ama ganacsatada boqolkiiba lacagta u janjeedha u jeeday macaamiisha cusub habka aad bixiso waxaa loogu yeedhi doonaa qaybsiga dakhliga.
Monsoon Traffic waa mid ka mid ah tusaalayaasha wanaagsan ee shirkadaha wadaagga dakhliga.
Sidee baad u isticmaali kartaa monsoon gaadiidka si ay u helaan lacag online?
Guud ahaan, waxaa jira afar siyaabood oo aad ku shaqeysatid lacag online adigoo isticmaalaya monsoon gaadiidka.
Links Cash: Waxaa caadi ahaan hal nooc ka mid ah la bixiyo si guji xayeysiis. Tani waxay ka caawisaa in nidaamka la-hawlgalayaasha in ay kor u dakhligooda. Monsoon Traffic yahay si aad u wanaagsan in industry PTC. Waxay leedahay dakhli weyn ka xayeysiiska PTC. Haddii aad rabto in aad kordhiso mushaarka badan 100% guji lacag caddaan ah links aad maalin kasta.
Waxaa jira 4 nooc oo xiriir lacag caddaan ah waxaa laga heli karaa in guji;
0.001 links lacag caddaan ah
0.005 links lacag caddaan ah
0.01 links lacag caddaan ah
0.02 links lacag caddaan ah
Gudbinta: Monsoon Traffic dalabyo a good commission to its referrer’s. Marka horumariyaha ah macmiil keentaa waxa uu heli doonaa 10 boqolkiiba guddiga on iibsan kasta oo 100 boqolkiiba guddiga halkii gujinaya links lacag caddaan kasta.
Wadaagga Dakhliga: Monsoon Traffic siinaysaa aad ah 110 lacag boqolkiiba dib on pack kasta oo ad. Qiimaha pack ad la bilaabo $50. Monsoon Traffic siinaysaa aad la wadaago booska ay site. In kasta, pack ad iibsadaan waxaad heli doontaa fursad in lagu furo booska wadaagga ah. Booska qaybsiga A ku siinayaa ah $55 soo laabtay. Waxaa loola jeedaa 110% lacag kaash ah dhabarka u ad kasta pack gadashada.
Barnaamijka Affiliate: Waxaad dooran kartaa monsoon gaadiidka Barnaamijka affiliate in la kordhiyo dakhliga ku soo gala. Waxaad heli doontaa 10 boqolkiiba guddiga on gudbinta iyo 100 boqolkiiba guddiga on link lacag caddaan ah.
Immisa lacag ah oo aad samayn kartaa in hal bil?
Waxaad ka kasban kartaa lacag aad u badan in hal bil haddii aad taqaan monsoon gaadiidka istaraatijiyad si aad u wanaagsan. Mid ka mid ah tusaale ahaan adiga kaa dhigi doonaa crystal cad.
Dakhliga Daily xayaysiinta gujinaya: $0.01*10 xayeysiis ah = $0.10 (xubin free)
Haddii aad qabto 10 gudbinta: 10*$0.10= $1 maalintii ($30 bishiiba)
Haddii aad qabto 100 gudbinta: 100*$0.10= $10 maalintii ($300 bishiiba)
Waxaad ka kasban kartaa $300 bil kasta haddii aad leedahay 100 gudbinta. Cirku ayaa inoo xad ah halkan ku saabsan dakhliga.
Haddii aad xiisaynayso inaad shaqeysatid lacag online fadhiya calaamad guriga ilaa monsoon gaadiidka maanta.
Traffic Monsoon Saxiix
← Free £ 10 dhinaca taxi magaalada cab (Heathrow, London, New York) on Android & iPhone Top 10 goobaha si ay u sameeyaan & shaqeysatid lacag free online (sameeyo $10,000+ dollar bil ah →